Madaxweynaha Jubbaland ”DF Somaliya waxay shaqadeeda ku soo arruurtay halkee dhisan oo aan duminaa”! | HalQaran.com
Madaxweynaha Jubbaland ”DF Somaliya waxay shaqadeeda ku soo arruurtay halkee dhisan oo aan duminaa”!
Kismaayo (Halqaran.com) – Madaxweynaha Jubbaland, mudane Axmed Maxamed Islaam ayaa isniintii maanta dib ugu soo laabtey magaalada Kismaayo ee xarunta Dowlad goboleedka Jubbaland, kadib safar shaqo oo uu dalka dibadiisa ugu maqnaa muddo 20 cisho ah.
Axmed Madoobe ayaa si kooban uga hadley xaalada gobolka Gedo iyo tallaabooyinka lagu carqaladeynayo amniga iyo Dowladnimada dalka ee ay DFS ka wado halkaas, kuwaas oo uu sheegay inaysan natiijo ka gaari doonin haddii aysan wado wanaagsan u soo marin kana waantoobin baalmarka dastuurka dalka u yaala.
Sidookale, madaxweynaha ayaa sheegay in xaalada Soomaaliya hadda aysan u baahneyn anaa idhi iyo sidaan rabaa socon, ee xalka ay u baahantahay uu yahay wadatashi iyo in isfaham rasmi ah lagaga gaaro waxkasta oo la isku qabto.
Ugu dambeyn, madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay, in Dowladda Federaalka Soomaaliya ay shaqadeeda dhanba kusoo uruurisey halkee dhisan oo aan duminaa ee aysan danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ka shaqeynin taasna xisaabi ka danbeyn doonto.
Dowlada waxay shaqadeeda ku soo aruurtay halkee dhisan oo aan duminaa